FS 2020 1 ọnwa 2 izu gara aga #1937
Ndewo FS ndị ọbịa,
Abụ m onye otu kemgbe 2017 doro anya. Enwetara m email chetaara m eziokwu a. Ekwebeghị m FSXm kemgbe m ga-akwụ ụgwọ maka FSX "EGO"Mgbe ọ gara na Steam ikpo okwu. Lee ihe mmechuihu. Ọ bụ ezie na m hụrụ n'anya na mmemme ahụ, ọ nweghị mgbe ọ ga-adịrịrị m mma, ọ ga-esokwa n'ụzọ.
Site na FS2020 ọhụrụ na-apụta, echere m na m ga-abata ma hụ ma ọ dị ihe ọhụụ na-aga ebe a.
Enwere m ajụjụ di na nwunye.
Obi dị onye ọ bụla ụtọ maka FS ọhụrụ na-apụta? Agaghị m enweta ya ruo mgbe ekeresimesi ka m chere.
Ànyị maara ma ọ bụrụ na nke ugbu a FSX ụgbọ elu ga-arụ ọrụ na ụdị ọhụụ?
Enwere atụmatụ ịtọghata? Chọrọ enwere mmemme iji duzie ha iji gbanwee ha? Nke ahụ agaghị adị mma.
Na-ele anya ịhụ gị niile na mbara igwe.
Obi ụtọ na-efe efe!
Ndumodu ikpe azu: site ehendrix.
FS 2020 1 ọnwa 2 izu gara aga #1940
Daalụ natara: 3
Enwere m obi abụọ na ụgbọ elu ndị dị ugbu a ga-arụ ọrụ. Dika m ghota ya FS2020 nwere otutu uzo ichoro iji mee ka ugbo elu.
Echere m na ọ ga-abụkwa nzuzu. Onwere ihe di egwu ma di egwu na ife efe adighi gi nma add-ons. Ma ka anyị chee ya ihu, ọtụtụ freeware dị ugbu a ga-eleba anya ntakịrị na-atụle ọganihu dị ịtụnanya a na-enwe na otú ọdịdị ihu igwe na ihu igwe wdg si gbasaa na MS2020. N'ụzọ ọ bụla, achọrọ m ịgbatu ọtụtụ freeware dị ugbu a dị ka dull ma dị mfe. Echere m na ọ ga-adị ka ọtụ ọchị ma ọ bụrụ na ha ga-ekwekọrịta.
Enwere m olileanya na ihe dịka Air Hauler 2 na SPAD na-esote ga-eme ka ọ bụrụ mmekorita n'oge na-adịghị anya (yana na-enweghị ịkwụ ụgwọ ọnụahịa ọzọ) SPad na-esote adịghị ọnụ ala, mana ọ bụ hel nke mmemme.
Ana m atụ anya ya, ọ bụ ezie na m nwere nnukwu nchegbu banyere ụdị nkọwa achọrọ. Nyere, PC m dị elu na-akwado ụdịdị, mana dịtụ n'okpuru nkọwa zuru oke. Ọ dị ya naanị ka ọ dị mma iji mee ka ọ na-agba ọsọ n'okirikiri okirikiri elu. Na-eme ka anyị chee ya ihu, iji nwee ike ịnụ ụtọ ọrụ ha tinyere na ya, mmadụ ga-enwe ike ịtọ ndị sliders ma ọ dịkarịa ala 1 isi n'okpuru ntọala max.
FS 2020 3 izu 1 ụbọchị ago #2002
HI Guys eee ka mmadu niile wee hu? Site na mkpesa sitere na ndi na anwale beta na Australia. Nwoke ọ choro otutu oru maka ndi oru pc dika o yiri ka emere Xbox, o di ka o weputara ya n'oge di anya maka ndi na-agba oso ugbo abuo otutu ugbo agha na-efeghi ugbo elu buru ibu nwere nsogbu ugbo elu, ugbo elu nke uwa ekpela pụta dị ka add-on na-enwe nchegbu.
Ndo ma nke ahụ bụ trurh! Anyị ga-echere ma hụ ihe ga-eme n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ. Nke a bụ nanị echiche mmadụ>
FS 2020 1 izu 2 ụbọchị ago #2028
Ọbụghị XBox naanị, FS2020 na-arụ ọrụ na PC. Enwetala m FS2020 na pc m, nha faịlụ ya bụ 90 gigabyte arụnyere na pc na ihe ngosi ahụ sitere na maapụ Bing nwere nha faịlụ 2 pikabyte na-ebufe na ịntanetị ka ọ fega gburugburu ụwa. Ezigbo mma ile ụlọ m anya mgbe m gbagoro n'elu ụlọ m, ee, ọ ga-ekwe omume ịhụ ụlọ ndị a, ọhịa, ụgbọ ala wdg. Enwere 3 iche FS2020 na m kwadoro Microsoft Flight Simulator: Premium Deluxe. Ọnụahịa anaghị adị ukwuu ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu ndị ọzọ.
Jide n'aka na i nwere pc ndị buru ibu karịa spesifications na-akwado iji FS2020 ma ọ bụ na ọ na-ekpo ọkụ na pc n'ihi etiti ọnụego na mkpebi dị elu na FS2020.
Banyere Jens Eirik, Norway
FS 2020 1 izu 2 ụbọchị ago #2029
Nke ahụ bụ ihe m kwesịrị ịma. N'ihi ya, a na-ewerekarị ihe nkiri site na Bingmaps. Yabụ ịdị mma inet chọrọ mgbe niile?
Kedu ihe eji data eme mgbe ị na-efe efe?
M nwere adịchaghị delux njikere arụnyere. Naanị m ga-echere ruo mgbe emezigharịrị m ma enwere m ike ịlaghachi na ikuku ikuku.
Anaghị m echegbu onwe m banyere ịdị elu. My ọhụrụ oche / n'ụlọ ndọkpo (wifey adịghị n'ezie ugbu a banyere ụlọ kokpiiti atụmatụ) ga-airconditioned na m usoro na-mgbe niile kwesịrị ekwesị mmiri mma.
FS 2020 1 izu 16 awa gara aga #2031
Nitrical: "Nke ahụ bụ ihe m kwesịrị ịma. N'ihi ya, a na-ewerekarị ihe nkiri site na Bingmaps. Yabụ ịdị mma inet chọrọ mgbe niile?
Kedu ihe eji data eme mgbe ị na-efe efe?"
A ghaghị ijikọ Internetntanetị n'oge niile mgbe ị na-efegharị n'akụkụ ihe ọ bụla n'ụwa ebe ọ bụ na ebe Bingmaps na realweather si Metar sitere na ịntanetị. Na mgbakwunye ị nwetara mmelite ọhụrụ site na Microsoft iji dozie chinchi na nsogbu na FS2020.
Amaghị m ihe data jiri mgbe m na-efe efe ebe ọ bụ na m dị ọhụrụ ka m fega na FS2020. (M kemgbe flightsimmer kemgbe fS 95 ugbu a ikpeazụ FS 2020 na na mgbakwunye Prepar 3D na X-plane).
FS 2020 3 ụbọchị 14 awa gara aga #2035
Abụ m onye nyocha alpha maka FS2020.
1) Ihe nkiri dị egwu. Site na nke kacha mma niile simulators.
2) Ndabere ọdụ ụgbọ elu na ụgbọ elu dị mma.
1) ATC bụ ihe nkiri
2) ugbu a na ọzọ CTD (okuku na desktọọpụ)
3) FSX or P3D ụgbọelu agaghị arụ ọrụ. A converting omume ga-adị ukwuu.
A na-atụ anya na a ga-edozi ihe site na mmelite n'ọdịnihu. Ọzọkwa eziokwu adịkwaghị akwado. Enwere m ngwugwu kachasị ọnụ ma jiri naanị FS2020. VFR ụgbọ elu enweghị atụ
Chọrọ njikọ ịntanetị ngwa ngwa, ka ị na-efe data site na ihe nkesa na ebe ọ bụla.
Ezi echiche, Eef Klaassen
Oge ike page: 0.418 sekọnd